Sannad gudihiis waxaan haysan doonnaa iPhone iyada oo aan "notch" iyo "Touch ID" Wararka IPhone
Uguyaraan taasi waa waxa ay falanqeeyayaashu yiraahdaan, taas oo aan ahayn in aysan khaldami karin. Falanqeeyayaasha kormeeraya alaab-qeybiyeyaasha Apple iyo khadadka isku imaatinkooda Waxay yiraahdaan dhowr sano gudahood waxaan haysan doonaa iPhone bilaa xog ah, iyo waxa khatarta badan leh, oo aan lahayn ID-ga.
Marka hore waxaa jiri doona hoos u dhac ku yimaada cabirka darajada, ka dibna gebi ahaanba tirtir oo ka saar Aqoonsiga Face-ka, Nidaamka aqoonsiga wejiga Apple ee hadda halyeeyada u ah olole xayaysiis cusub, iyadoo taa bedelkeed la adeegsanayo Touch ID. Apple dib ma uga laaban doontaa dib u soo celinta tikniyoolajiyaddaas? Faahfaahinta hoose.
Qiyaasahaani waxay ka yimaadeen gacanta Ming-Chi Kuo, oo horeyba si fiican u wada garaney dhamaanteen, iyo China Times, sidoo kale waa isha laga helayo xanta ku saabsan Apple oo leh ku dhowaad isku mid guul iyo guuldarooyin. Si aan loogu jahwareerin mid kasta oo ka mid ah wuxuu leeyahay, waxaan ku soo koobi karnaa waxyaabaha soo socda:
2019: moodooyinka cusub ee iPhone-ka ee la bilaabay waxay yeelan doonaan aqoonsi Face ah waxayna ku sii socon doonaan si isku mid ah.
2020: Waxaa jiri doona laba nooc oo iPhone ah oo yeelan doona Face ID laakiin qaangaadhku wuu yaraan doonaa cabirkiisa, waxaana jiri doona nooc cusub oo iPhone ah oo aan lahayn darajo isla markaana leh Touch ID isku dhafan shaashadda hoosteeda.
2021: Saddexda nooc ee cusub ee iPhone-ka ah ayaa beddeli doona Aqoonsiga Face-ka ee ah Aqoonsiga Taabashada ee shaashadda hoostiisa shaashaddana way ka maqnaan doonaan.
Apple miyuu badali doonaa Aqoonsigiisa cusub ee Face ID-ga isagoo dib ugu noqonaya Touch ID? Ahaanshaha suurtagalnimada in mudnaanta ay umuuqato wax aan dhici karin, way dhici kartaa iyada oo lagu taageerayo naqshad cusub iyo Aqoonsi cusub oo Taabasho ah oo wax yar ama aan waxba ka qabanaynin midka ay adeegsato Apple illaa iPhone 8 iyo 8 Plus. Aqoonsigan cusub ee loo yaqaan 'Touch ID' wuxuu ka shaqeyn lahaa shaashadda oo dhan, iyadoo aan loo eegaynin meesha aan taabanno, si ka duwan waxa hadda dhaca ee ku dhaca dareemayaasha faraha oo qaar ka mid ah boosteejooyinka ay ku midoobeen shaashada.
Tan tan waa inaan ku darnaa suurtagalnimada soo saarista taleefan casri ah oo hortiisa gebi ahaanba shaashadda la qabsaday, naqshad ay dad badani ku hamiyaan oo aan weli lagu guuleysan wax soo saare kasta. Holes, notch, garka ... taleefannada oo dhan xilligan waxay leeyihiin xoogaa "asymmetry" Taasi waxay ka hortageysaa naqshaddan nadiifka ah, oo laga yaabee inay taasi sabab u noqon lahayd in Apple ay ka saarto Aqoonsiga Face-ka koontoroolada. In kasta oo ay jiraan sababahan suurtagalka ah, haddana sharad kuma gelin lahaa xilligan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Sannad gudihiis waxaan haysan doonnaa iPhone iyada oo aan "notch" iyo "ID ID"
Waxaan u maleynayaa inay xoogaa khilaafsan tahay tan iyo markii la soo bandhigayay tiknoolajiyada Aqoonsiga Aqoonsiga, waxaa lagu sharaxay inay fulisay shaqadeedii oo aad uga fiicneyd Taabashada Aqoonsiga marka ay timaado aqoonsiga aqoonsiga iyo in khaladkeeda khaladka ah uu aad uga adag yahay kan Touch ID .
Ilaa tiknoolajiyada faraha si weyn loo hagaajiyo, uma maleynayo inay sidaas tahay.
Hubi Vivo Nex dual Screen qaabkani wuxuu tirtirayay qormooyinka muddo 7 bilood ah wuxuuna leeyahay teknolojiyad lagu furo taleefanka gacanta iyadoo la adeegsanayo wajiga id oo la taabto Id, waad soo dhaweyneysaa! Mahadsanid!
IPhone-yada laga sameeyay Hindiya waxay bilaabeen in lagu iibiyo Yurub